Phupha ngeNkqubo Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neNkqubo
Xa uphawu "umgwebo" lubonakala emaphupheni ethu, luhlala lwenzeka kwimeko ye Ubulungisa nokunyanzeliswa komthetho. Ephupheni, kusenokwenzeka ukuba kurhanelwa ukuba senze ulwaphulo-mthetho kwaye kufuneka silinde ukuvavanywa kwezibakala ngaphambi kokwazi ukuba bohlwaywa okanye hayi.
Amaphupha anjalo kunqabile ukuba ahambisane neemvakalelo ezilungileyo. Kuphela yenye indlela ejikelezileyo ukuba iphupha alikho malunga nenkqubo yokugweba, kodwa malunga nesicwangciso esithile, isicwangciso okanye inkqubo. Ukuba siphupha ngenkqubo enjalo, akunakulindeleka ukuba sibe nethemba lokuphumelela kwimeko yamaphupha kwaye sonwabe.
Ke ngoko, imeko apho "inkqubo" yesimboli iphuphileyo ingahluka kakhulu. Kubalulekile ukuthathela ingqalelo oku xa utolika amaphupha.
1 "Inkqubo" yesimboli yephupha - ukutolika ngokubanzi
2 'Inkqubo' yesimboli yephupha-ukutolikwa kwengqondo
3 "Inkqubo" yesimboli yephupha - ukutolika kokomoya
"Inkqubo" yesimboli yephupha - ukutolika ngokubanzi
Ephupheni, inkqubo yezomthetho sisimboli sesilumkiso: iqela elinomdla lisongela abahlobo, abantu obaqhelileyo okanye abantu osebenza nabo. wangcatshwa yiba.
Kungakhathaliseki ukuba unetyala ngokwenene okanye cha, uyayenza izityholo. Ungatyholwa ngokulalela okanye ngokuxoka. Ngexesha elizayo, umphuphi kufuneka azame el mundo Ukusuka ekuvukeni gcina imithambo-luvo yakho yomelele kwaye uzibambele ubunzima obuzayo.
Kule meko, inkqubo yamaphupha inokubonisa ukuba iingxaki ekugqibeleni zinazo Utshintsho Ukhatshwa. Kunganyanzeleka ukuba utshintshe imeko-bume yemihla ngemihla.
Nabani na ongoyikiyo malunga nokulingwa ephupheni, kodwa ubandakanyeka njengengqina, umzekelo, ebomini bokwenyani, ingxaki thintela. Into ethandabuzekayo, nangona kunjalo, yindlela lo mntu kuthethwa ngaye awuthintela ngayo umsindo kuye. Mhlawumbi uhlala utyhola abanye? Okanye ngaba ungumhlobo wokwenene oluncedo kwaye, ngokuchaseneyo, unokujonga kwinkxaso yabahlobo bakhe?
Inkqubo yephupha ngokwentsingiselo yesenzo esithile kunye nokujolisa kakhulu, isicwangciso okanye indlela ikwaluphawu lwinyathelo elibalulekileyo kwinqanaba lomntu. phuhliso. Isimboli yenkqubo ke ibonisa ukuba umntu ochaphazelekayo unokulandela okanye aphumeze indlela yakhe yobomi Iimeko ezichanekileyo kwimeko yamaphupha zibonelela ngolwazi ngakumbi malunga noku.
'Inkqubo' yesimboli yephupha-ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, inkqubo ihlala ibonisa ungquzulwano lwangaphakathi lomntu ochaphazelekayo. Okwangoku kunokwenzeka ukuba ukhathalele isiqu sakho, ixabiso lakho, isimilo sakho, ixesha lakho elidlulileyo kunye nekamva lakho. Apha, nangona kunjalo, akanalo uxolo ngokupheleleyo nesiqu sakhe. Ngokukodwa Ukuzingcikiva kwaye isazela esinetyala sinokuzibonakalisa ngokwenkqubo ephupheni. Umntu ekubhekiswa kuye ukhangelwe ngokomfuziselo «uya enkundleni naye «.
Le nkqubo ibaluleke ngokukodwa ekuphumeleleni kokuvuthwa ngaphakathi. Nangona kunjalo, ekugqibeleni, ungakulibali ukugxeka okunamandla ukuze uzithande kwaye ukhusele ubuntu bakho nazo zonke iimpawu zayo.
"Inkqubo" yesimboli yephupha - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokomoya, "inkqubo" yesimboli yephupha isetyenziselwa uphawu lokukhula kwengqondo. Umntu ochaphazelekayo ujongene nobutyala kunye neemvakalelo zokuzisola. Le ine enempilo isiphumo.
Phupha malunga ne-tuna
Iphupha malunga neNombolo 80